အငျဒိုနီးရှားမှာ လောငျကြှမျးခဲ့တဲ့ တောမီးကွောငျ့ လထေုအတျောလေး ညဈညမျးခဲ့ရပွီး တောရိုငျးတိရိစ်ဆာနျအမြားအပွားနဲ့ သဈတောအမြားအပွား ပကျြစီးဆုံးရှုံးမှုတှဖွေဈပျေါခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အနီးနားက နအေိမျတှလေညျး မီးထဲ ပါသှားခဲ့ပွီး လူမှု့ကှနျယကျပျေါဖွနျ့ဝခေဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ ဧရာမတှားသှား သတ်တဝါတှေ အမြားအပွားလညျး သကွေပေကျြစီးခဲ့တာတှရေ့ပါတယျ။
အဆိုပါ အငျဒိုနီးရှားတောမီးကွောငျ့ မလေးရှားမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ ၁၇ရကျနကေ့ လထေုညဈညမျးမှု ညှနျကိနျး ၅၀၀ထကျကြျောကွောငျး National Disaster Management အဂေငျြစီရဲ့ အရေးပျေါ ကွညောခကျြတှအေရ သိခဲ့ရပါတယျ။ မီးခိုးဒဏျကို မလေးရှားက ခံခဲ့ရတာဖွဈပွီး စကျတငျဘာ ၁၈ရကျနေ့ BOS ဖောငျဒေးရှငျးက မြှဝခေဲ့တဲ့ ပို့ဈထဲမှာ အဆိုပါတောမီးလောငျမှုကွောငျ့ အရှညျ ၁၀မီတာ ကွီးမားရှညျလြားတဲ့ စပါးအုံးမွှကွေီးလညျး မီးလောငျးကြှမျသဆေုံးနတော တှခေဲ့ရပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ သူရဲ့ မိသားစုဝငျတှလေို့ ထငျရတဲ့ အခွားမွှတှေလေညျး အဆိုပါ မွှကွေီးရဲ့ အနီးနားမှာ အစုလိုကျ အပွုံလိုကျ မီးလောငျကြှမျးနတောတှရေ့ပါတယျ။ အရှညျ ၃၂ပဆေိုတဲ့ အရှယျအစားဟာ ဆိတျတို့ နှားတို့ကို အလှယျတကူ မြိုခနြိုငျလောကျအောငျ ကွီးမားတဲ့ အရှယျအစားပါ။ မွှကွေီးဟာ မီးတောထဲက လှတျမွောကျအောငျ ကွိုးစားခဲ့ဟနျတူပမေဲ့ စိတျမကောငျးစှာပဲ မလှတျမွောကျခဲ့ရပါဘူး။
Wildlife not have time when fire come. Some of them can fly and run faster will survive, but how about wildlife like this ? Can they run more faster then fire ?
Gepostet von CAN Borneo am Sonntag, 15. September 2019
တောမီးငွိမျးသှားတဲ့ အခြိနျမှာတော့ အဆိုပါ မွှကွေီး အပါအဝငျ အခွား မွှပေေါကျလေးတှရေော အကုနျးလုံး မီးကြှမျးနပေါပွီ။ လကျရှိအခွအေနမှော Borneo Orangutan Suvival (BOS) ဖောငျဒေးရှငျးက ဘေးကငျးလုံခွုံဖို့အတှကျ လူအငျအားအပါအဝငျလိုအပျတဲ့ ပစ်စညျးကိရိယာတှေ၊ ရစေုတျစကျတှေ၊ မီးဘေးအန်တရာယျ ကွိုတငျကှယျရေးစနဈတှေ တညျဆောကျဖို့ ပွုလုပျနပေါတယျ။
တောမီးကြောင့် မီးလောင်ပြီး သေဆုံးသွားတဲ့ အရှည် ၃၂ပေ ရှိတဲ့ စပါးအုံးမြွေကြီး
မလေးရှားမှာ လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ တောမီးကြောင့် လေထုအတော်လေး ညစ်ညမ်းခဲ့ရပြီး တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်အများအပြားနဲ့ သစ်တောအများအပြား ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အနီးနားက နေအိမ်တွေလည်း မီးထဲ ပါသွားခဲ့ပြီး လူမှု့ကွန်ယက်ပေါ်ဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ ဧရာမတွားသွား သတ္တဝါတွေ အများအပြားလည်း သေကြေပျက်စီးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၇ရက်နေ့က လေထုညစ်ညမ်းမှု ညွှန်ကိန်းဟာ ၅၀၀ထက်ကျော်လွန်ခဲ့တာကြောင့် National Disaster Management အေဂျင်စီက အရေးပေါ် ကြေညာချက်တွေတောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၁၈ရက်နေ့ BOS ဖောင်ဒေးရှင်းက မျှဝေခဲ့တဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ အဆိုပါတောမီးလောင်မှုကြောင့် အရှည် ၁၀မီတာ ကြီးမားရှည်လျားတဲ့ စပါးအုံးမြွေကြီးလည်း မီးလောင်းကျွမ်သေဆုံးနေတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူရဲ့ မိသားစုဝင်တွေလို့ ထင်ရတဲ့ အခြားမြွေတွေလည်း အဆိုပါ မြွေကြီးရဲ့ အနီးနားမှာ အစုလိုက် အပြုံလိုက် မီးလောင်ကျွမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ အရှည် ၃၂ပေဆိုတဲ့ အရွယ်အစားဟာ ဆိတ်တို့ နွားတို့ကို အလွယ်တကူ မျိုချနိုင်လောက်အောင် ကြီးမားတဲ့ အရွယ်အစားပါ။ မြွေကြီးဟာ မီးတောထဲက လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားခဲ့ဟန်တူပေမဲ့ စိတ်မကောင်းစွာပဲ မလွတ်မြောက်ခဲ့ရပါဘူး။
တောမီးငြိမ်းသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ အဆိုပါ မြွေကြီး အပါအဝင် အခြား မြွေပေါက်လေးတွေရော အကုန်းလုံး မီးကျွမ်းနေပါပြီ။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ Borneo Orangutan Suvival (BOS) ဖောင်ဒေးရှင်းက ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့အတွက် လူအင်အားအပါအဝင်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေ၊ ရေစုတ်စက်တွေ၊ မီးဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကွယ်ရေးစနစ်တွေ တည်ဆောက်ဖို့ ပြုလုပ်နေပါတယ်။